वर्षकी छोरीलाई आफ्नै बाबुले कर’णी गरेको छिमेकीले देखेपछि ….. – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/वर्षकी छोरीलाई आफ्नै बाबुले कर’णी गरेको छिमेकीले देखेपछि …..
काठमाडौं । झापामा आफ्नै नाबालिका छोरीलाई एक महिना यताबाट पटक–पटक कर’णी गरेको आरोपमा बावु पक्राउ परेका छन् । आमाले अर्को विवाह गरेर गएको १२ वर्षकी छोरी बाबुवाटै पीडित भएकी थिइन् । सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका १३ घर भइ हाल झापाको साविक गरामनी गाविस हाल विर्तामोड नगरपालिका–८ मा डेरा गरी वस्ने बावुलाइ पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
बाबुको कु’कर्मका बारेमा छिमेकीले थाहा पाएर प्रहरीलाई खबर गरिदिएका थिए । बाबुको पञ्’जावाट उ’म्कन छोरी भा’गेर छिमेकीको घरमा शरण लिन पुगेकी थिइन् । छिमेकीले हरेक राती छोरी रुँ’दै करा’एको आफुहरुले सुन्ने गरेको भएपनि आफ्नै बाबुले छोरीलाई त्य’स्तो सम्म गरेको होला भन्ने अनुमान नगरेको बताएका छन् । रमाइलो र हट भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्
भा’गेर गएकी बालिकाले बाबुले आफुमाथि कु’कर्म गरेको छिमेकीलाई सुनाएकी थिइन् । आरोपितले पटक – पटक नाबालिका छोरीलाई कर’णी गरेको स्थानीयले चाल पाएका थिए । पछिल्लो पटक विहीबार राती साढे ९ बजे घरमा कोही नभएको मौका पारी कर’णी गरेको स्थानीयले पुनःजानकारी पाएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आरोपितलाई नि’यन्त्रण’मा लिइएकोे जिल्लाका डिएसपी राकेश थापाले बताए । १२ वर्षीया नाबालिका छोरीलाई कर’णी गरेको आरोपमा बावुलाई नि’यन्त्र’णमा लिइ इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए । विश्वभरका सुन्दर युवतीहरुको रमाइलो भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्
नेपालमा अब लकडाउन नगरिने, यस्तो छ अर्को तयारी ! सबैले एकपटक हेर्नैपर्ने !
‘अन्‍नपूर्ण ज्याकेट’ दुरुपयोग नगर्न एएमएनको अनुरोध